कर नलाग्ने किताब - परिहास - नेपाल
सरकारले पुस्तकमा पनि कर लिन थालेपछि पाठक कराउन थालेका छन् । यो के गरेको सरकारले ? पुस्तकमा पनि कर लिन पाइन्छ ? पुस्तक भनेको त पढ्ने वस्तु हो । पढ्ने वस्तुमा कर लिन पाइँदैन ।
अब यी पुस्तकका पाठकलाई थाहा हुनुपर्ने हो, कर नलिए त सरकारै चल्दैन । सरकार चल्ने भनेकै कि करले हो, कि डरले हो । त्यही भएर कर लिन पाइँदैन त भन्नै मिल्दैन । त्यसमाथि सरकारले सबै पुस्तकमा कर लिएको पनि होइन । नेपालमै लेखिएका पुस्तकमा कर लगाएको छैन । त्यसैले पाठकले यही पुस्तक पढून् । किन कर लगाएकै पुस्तक पढ्नुपर्‍यो ? जस्तो, प्रधानमन्त्रीकै भाषणको संकलन पुस्तक निस्केको छ । त्यसमा कर लाग्दैन । त्यो पढे पनि हुन्छ । भूपूप्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनालको गीतिकाव्य पनि प्रकाशित भएको छ । त्यो पढे पनि भइहाल्यो । कमरेड माधव नेपालले संसद्मा बोल्नुभएको भाषण संग्रह पनि प्रकाशित भएको छ । त्यसमा पनि कर लाग्दैन । हालै मात्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य संग्रह पनि प्रकाशित भएको छ । त्यसको मूल्य त अलि बढी छ तर करचाहिँ लाग्दैन । सायद शेरबहादुर देउवाको भाषण संग्रह पनि आउँदै होला, त्यसमा पनि कर लाग्ने छैन । देशभित्रै यति धेरै कर नलाग्ने पुस्तक हुँदाहुँदै किन कर लाग्ने पुस्तक नै पढ्नुपर्‍यो ? आफूचाहिँ स्वदेशी पुस्तक छाडेर खोजी–खोजी विदेशी पुस्तक पढ्ने अनि कर लाग्यो भनेर पनि कराउने ?